Muti wekurwisa shanduko yemamiriro ekunze: iyo Kiri | Green Renewables
Muti wekurwisa shanduko yemamiriro ekunze: iyo Kiri
Imwe yemhinduro dzekurwa shanduko yemamiriro ekunze uye kudziya kwepasi ndiko kuwedzera munzvimbo dzine masango. Izvi zvinodaro nekuti miti inonwisa iyo CO2 yatinoburitsa muzviitiko zvedu uye mukutakura. Iyo inowedzera nzvimbo dzegirinhi pane iyo nyika, iyo inowedzera CO2 inozotorwa.
Kunyangwe chengetedza masango uye uwedzere mahekita awo zvakakosha kune ramangwana redu, mwana wevanhu anoomerera pakuvaparadza kuti vagadzire huni kana kuti vatengese navo. Pakati pemarudzi ese emiti aripo pasirese, pane mumwe kunyanya ungatibatsire zvakanyanya mukurwisa shanduko yemamiriro ekunze. Icho chiri pamusoro peKiri.
1 Nyika mamiriro emasango
2 Muti unotibatsira kupikisa shanduko yemamiriro ekunze
3 Muti uyu waizivikanwa sei?
Nyika mamiriro emasango
Pasi rese pasi ivo vari kutemerwa pasi nekuparadzwa anenge mahekita mamirioni gumi nematatu pagore zvinoenderana nedata rakawanikwa kubva kuUN. Kunyangwe tichivimba nemiti yekurarama nekufema, isu takatsunga kuiparadza. Zvirimwa nemiti mapapu edu uye ndiyo chete nzira yatingarambe tiri vapenyu sezvo ichipa oxygen yatinofema.
Muti unotibatsira kupikisa shanduko yemamiriro ekunze
Muti uyu unogona kutibatsira mukurwisa shanduko yemamiriro ekunze unonzi Kiri. Zita rayo resainzi muti wemambokadzi kana Paulownia tomentosa. Iyo inouya kubva kuChina uye inogona kusvika kusvika pamamita 27 kukwirira. Hunde yayo inogona kuva pakati pe7 kusvika 20 metres dhayamita uye ine mashizha anenge 40 masendimita paupamhi. Nzvimbo yaro yekuparadzira inowanzoitika pakukwirira kwakadzika kupfuura 1.800 metres uye inogona kurarama munzvimbo idzi kunyangwe ichirimwa kana yemusango.
Muti une hunhu hunoenderana neyakajairika chimiro chechero muti. Asi nei zviri izvo kuti Kiri kunyanya anogona kubatsira kupfuura vamwe mukurwisa shanduko yemamiriro ekunze?
Miti yese yakasvibira, zvirimwa nemakwenzi photosynthesize, inotora CO2 kubva kunharaunda kuti ishandure uye isunungure oxygen. Nekudaro, pakati pehunhu hunoita kuti Kiri ive yakasarudzika kuve mukwikwidzi uyo anotibatsira kupokana neshanduko yemamiriro ekunze tinowana kugona kwayo kuchenesa ivhu risina ivhu rakakomberedza uyezve kunwiwa kwayo kwe CO2 kwakapetwa kagumi pane kweimwe mhando yemuti.
Nekuti iyo CO2 yekumwa mwero yakanyanya kukura kupfuura iyo yemamwe marudzi, saka neayo oxygen oxygen chiyero. Imwe yekukanganisa kwekudyarwa kwemasango inguva inotora kuti miti ikure uye ive nenzvimbo yemashizha yakakwana kuti ikwanise kubatsira iyo O2-CO2 muyero wepasi. Nekudaro, iyo Kiri inokura nekukurumidza zvakanyanya kupfuura mamwe ese marudzi. Ndiwo muti unokurumidza kukura pasi rese, zvakanyanya zvekuti mu makore masere chete anokwanisa kusvika pakureba kwakaenzana neouki hwemakore angangoita makumi mana ekuberekwa. Unoziva here kuti chii ichocho? Kuchengetedzwa kwemakore makumi matatu nemasere mumasango emiti. Kugadzira kuenzana kukupa iwe zano riri nani, uyu muti unogona kukura muvhu rakajairika avhareji yemasentimita maviri pazuva. Izvi zvakare zvinobatsira kuti nekumutsiridza midzi yawo uye midzi yekukura kwemidziyo, inogona kuramba moto zviri nani kupfuura mamwe marudzi.
Muti uyu une kugona kukuru kwekuzvarwa patsva sezvo uchitogona kumera zvakare kusvika kanomwe mushure mekuchekwa. Inogona zvakare kukura muivhu yakasviba nemvura uye, mukuita kudaro, inonatsa ivhu kubva kumashizha ayo akapfuma mu nitrogen. Munguva yehupenyu hwawo, muti uri kudurura mashizha awo uye paanodonha pasi iwo anoora uye anopa chikafu kune iwo. Tinofanira kutaura kuti kana muti uyu ukakura muvhu rakasviba kana uine hutachiona hushoma, kukura kwawo kunenge kuri kunonoka kupfuura kana kuchikura muvhu zvine mwero uye zvine hutano. Kuti igone kurarama nekukura zvakaringana muvhu rakashata uye rakakanganiswa, zvinoda manyowa nemadiridziro.
Muti uyu waizivikanwa sei?
Zita rayo rinoreva "kucheka" muchiJapan. Huni dzayo dzakakosha zvikuru nekuti dzinogona kutemwa kazhinji kuitira kuti ikure nekukurumidza nekuishandisa sechinhu. Mune zvitendero zveChinese netsika, uyu mambokadzi muti wakasimwa pakazvarwa musikana. Nekuda kwekukura nekukurumidza kwemuti, waizoperekedza musikana mukukura kwake uye kukura, nenzira yekuti kana achizosarudzirwa kuroorwa, muti wacho waizotemwa huni dzawo dzaishandiswa pakuveza zvinhu zvemuchato wake .
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Muti wekurwisa shanduko yemamiriro ekunze: iyo Kiri
Hugo ferrari akadaro
Kiri akaunzwa muUruguay nainjiniya wezvemasango Josef Krall uye miedzo haina kushanda. Vakaunzwa mukukura kwavo nekukurumidza asi fungus haina kuenderana navo. Kune mhando idzo dzinosiyana maitiro hadzibvumidze kuti dzigadzirise
Pindura Hugo Ferrari
Zvinoita here kuti chitsuwa chiwanikwe chete nesimba rinowedzerwazve?
China Inobvumidza Bhiriyoni Dollar Renewable Energy Chirongwa